उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम पुगे देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ Canada Nepal
उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम पुगे देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ
चैत्र ३१ २०७७
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगेका छन् ।
मंगलबार देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका यादव र डा. भट्टराईले कांग्रेस सभापति देउवासँग सत्ता सहकार्यका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।
गत शुक्रबार कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेको भन्दै जसपाका नेताहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । आन्तरिक छलफलपछि जसपाका यादव र डा. भट्टराई देउवा भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगेका हुन् ।
यसअघि गत शुक्रबार देउवाले माओवादी र जसपाबीच संयुक्त बैठक राखेर नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । जसमा माओवादी केन्द्र सहमत भएको थियो भने जसपाले निर्णय गरेर जवाफ दिने बताएको थियो ।
चैत्र ३१, २०७७ मंगलवार १७:२८:४४ बजे : प्रकाशित